Indlela yokwenza nokusebenzisa iiplati zeDot kunye neeCards zeMatriki eziSeko
Ukusebenzisa iipatheni zeDot ukufundisa iinombolo zeenombolo
Iipateni zamakhadi okanye iiPhepha zePhepha. D. Russell
Xa abantwana befunda ukubala, ngokuqhelekileyo kuthatha uhlobo lwe-rote okanye ukubala ngememori. Ukuncedisa abafundi abancinci ukuba baqonde inombolo kunye nobungakanani, le ndlu eyenziwe ngamacwecwe amacwecwe okanye amakhadi adibanisa iya kuba yinto ebalulekileyo kwaye yinto engasetyenziswa ngokuphindaphindiweyo ukunceda ngeendlela ezahlukeneyo zeenombolo.
Indlela yokwenza iiplati zeDot okanye iiCard Dot
Ukusebenzisa iiplanga zamaphepha (kungekhona uhlobo lweplastiki okanye uhlobo lwe-styrofoam njengoko kungabonakali ukusebenza kwakhona) okanye iphepha elikhuni lamaphepha esitokisi lisebenzisa umzekelo owenzelwe ukwenza iindidi zamacwecwe okanye amakhadi. Sebenzisa i-bingo dabber okanye izitifiketi ezimele 'iipips' okanye amachaphaza kwiiplate. Zama ukuqulunqa amachaphaza ngeendlela ezahlukeneyo njengoko kuboniswe (kwiintathu, yenza umqolo wamathathu amathathu kwiplani enye nakwezinye iiplani, ulungise amachaphaza amathathu ibe ngumzekelo wesigxina.) Xa kunokwenzeka, umele inombolo ene-1- Amalungiselelo amacandelo amathathu. Xa ugqiba, kufuneka ube neeplati ezili-15 zamacwecwe okanye amakhadi. Amacatshana akufanele apheliswe ngokulula okanye ahlulwe njengoko uzakufuna ukusebenzisa iiplate ngokuphindaphindiweyo.
Indlela yokusebenzisa iiplati zeDot okanye iiCards
Ngokuxhomekeke kwiminyaka yomntwana okanye abantwana, ungasebenzisa enye okanye ezimbini iiplati ngexesha lezinto ezilandelayo. Umsebenzi ngamnye uza kuba nephepha elilodwa okanye ezimbini kwaye ubuze imibuzo. Injongo yenzelwe ukuba abantwana babone ukuma kwamachaphaza epakiti kwaye xa bebanjwe phezulu, baya kuqonda ukuba i-five okanye 9 ngokukhawuleza. Ufuna ukuba abantwana baphumelele ukuya kubalunye amanani amanani kwaye baqaphele inamba ngamalungiselelo ecaca. Cinga ngendlela oya kubona ngayo inombolo kwi-dice, awuyi kubala iipips kodwa uyazi xa ubona i-4 ne-5 ukuba yi-9. Yilokho ofuna ukuba abantwana bakho bafunde.
Bamba iiplati enye okanye ezimbini uze ucele ukuba yeyiphi inamba / zimela, okanye zingaphi iindiza ezikhoyo. Yenza ezi zihlandlo zide ukuphendula iimpendulo zibe zizenzekelayo.
Sebenzisa amacwecwe amacwecwe eenkcukacha zokudibanisa ezisisiseko, zibambe iiplate ezimbini uze ucele isamba.
Sebenzisa amacwecwe amacwecwe ukuze ufundise amahange anama-5 no-10. Bamba isitya esinye kwaye uthi, yintoni enye ngaphezulu okanye ngaphezulu kwe-10 kwaye iphinda iphinda iphinde iphindwe kubantwana baphendule ngokukhawuleza.
Sebenzisa amacwecwe amacwecwe okuphindaphinda. Naluphi na i-fact usebenza kuyo, bamba ipakethi yesikhalazo uze ubacele ukuba bayandise ngo-4. okanye gcina 4 kwaye uqhubeke ubonisa iplani eyahlukeneyo de bafunde indlela yokwandisa onke amanani ngo-4. Fundisa inyaniso ehlukile ngenyanga . Xa zonke iinkcukacha ziyaziwa, zibamba iiplani ezi-2 ngokulandelelana uze uzicele ukuba zande ii-2.
Sebenzisa amacwecwe angaphezulu kwe-1 okanye ngaphantsi kwe-2 okanye ngaphezulu kwe-2 okanye ngaphantsi kwe-2. Bamba ipakethi uze uthe le nombolo engaphantsi kwe-2 okanye le nani kunye no-2.
Iiplati okanye iikhadi zeDot yindlela enye yokunceda abafundi bafunde ukulondolozwa kwenani, ukunyusa okubalulekileyo, iinkcukacha zokukhupha kunye nokuphindaphinda. Nangona kunjalo, benza ukwenza ukufunda kube mnandi. Ukuba unotitshala, ungasebenzisa iiplati zezicatshulwa zemihla ngemihla ukuze wenze umsebenzi weentsimbi. Abafundi banokudlala kunye namacwecwe amacwecwe.
Iincwadi ezi-7 eziphezulu malunga ne-Lewis kunye ne-Clark Expedition
Kutheni IArgentina Yamkela Iimfazwe ZamaNazi Emva kweMfazwe Yehlabathi II
Iimfundiso zeBhayibhile Ngothando LukaThixo Kithina
Yintoni ekhompyutheni yeNitrogen okanye iNitrogen Fixation?
I-Biography kaJames Madison, uMongameli we-4 we-United States
Udliwano-mbululo lweJob kwiSL
I-Green Algae (iClorophyta)
7 Mhle, Mbi, Nento Enhle-Bayiyo Ilizwe Ekhohlakeleyo IiJokes
Cernunnos - UThixo Wamahlathi wehlathi